Stephen Hawking ‘indheer-garadkii’ la dayacay | Hangool News
Stephen Hawking ‘indheer-garadkii’ la dayacay
March 14, 2019 - Written by Hangool News 1
Kalkaalisadii aqoon-yahan Stephan Hawking daryeelaysay ayaa lagu eedeeyay dayac iyo adeeg xumo uu kala kulmay mudadii uu xannuunsanaa.
Stephen ayaa u dhintay xanuun ku dhaca neerfaha maskaxda iyo xangulaha oo loo yaqaano (Danab maskaxeed) sannadkii 2018-kii.
Haweenaydan oo lagu magacaabo Patricia oo ah 61 jir u shaqeyn jirtay aqoon-yahanka caanka ah mudo 15 sanno ah ayaa la siiyay ganaax ku meel gaar ah sannadkii 2016.
Hey’adda Nursing and Midwifery Council ayaa ogaatay in aysan kalkaalisadani bixin adeeg tayo leh iyo in aysan siin xannaanadii uu u baahnaa aqoon yahay-kan geeryooday ee Hawking.
Hey’adda NMC ayaa sameysay go’aan ay kaga qaadayaan ruqsada shaqada kalkaalisada haweenaydan loo haysto dayaca ay u geysatay aqoon-yahan geeryooday’
Matthew oo ah madaxa rugta caafimaadka jirka ayaa sheegay in uu si dhow xiriir ugala sameeyey arinkan qoyska aqoonyahanka geeryooday,waqti ay soo dhawdahay xuska ka soo wareegay dhimashadiisa.
Afhayeen u hadlay qoyska aqoon-yahanka geeryooday ayaa xusay in murugadan ay waqtigan soo gabagabowday balse aan loo baahnay in ay cidkale wajahdo arinkan oo kale sidoo kale waxay u mahad-celiyeen dadaalka ay bixisay hey’addan baaritaanka ku sameysay falkan.
Aqoon-yahanka wuxuu ku geeryooday gurigiisa oo ku yaalay magaalada Cambrige bishii maarso waqtigaas oo uu ahaa 76 jir la noolaa xannuunka (Danab maskaxeed) mudo 50 sanno ah.
Kumuu ahaa Stephen Hawking
Image captionHawkings oo mar dhex tagay dayac-gacmeed hawada sare ku jira